लगानी रियल एस्टेट लगानी विशेषज्ञ विशेषज्ञ वकील कानून विशेषज्ञहरू
वास्तविक ईस्टेट ब्रोकर
मेरो स्पेस सिर्जना गर्नुहोस्
सम्पत्ति व्यवस्थापन पोर्टल विशेष रूपमा सम्पत्ती मालिकको लागि विश्व वा सम्पत्ति व्यापारीहरूको लागि सिर्जना गरिएको MY कार्यालय घर जग्गा लगानीकर्ताहरूलाई सारा संसारभरि उनीहरूको घर जग्गाको पूर्ण अनलाइन व्यवस्थापन वहन गर्न अनुमति दिन्छ। खरीद गर्नुहोस्, बिक्री गर्नुहोस्, भाँडामा लिनुहोस् वा तपाईंको कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट घर जग्गामा लगानी पनि सम्भव छ FIDULINK र उसको घर जग्गा दलाल नेटवर्क।
मेरो अफिस स्पेस सिर्जना गर्नुहोस्
वास्तविक ईस्टेट ब्रोकर?
केही मिनेटमा तपाइँको खाता सिर्जना गर्नुहोस्
नि: शुल्क मेरो कार्यालय स्पेस!
वास्तविक एस्टेटमा लगानी गर्नुहोस्
FIDULINK विश्वको सबैभन्दा ठूलो राजधानीमा भाडा, खरीद, घर जग्गाको बिक्रीको क्षेत्रमा अचल सम्पत्ति सम्पत्तिहरूको सहयोग र व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्दछ। एक अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति को साथ साथै विश्वभरका पार्टनरहरूको एक अद्वितीय नेटवर्क। तपाईको सेवामा एक व्यक्तिगत अचल सम्पत्ती एजेन्टको सुविधा २ 24/7। तपाईंको घर जग्गा सम्पत्तिहरू प्रबन्ध गर्न पोर्टल।
के तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि घर जग्गा वा वाणिज्य परिसर खोज्दै हुनुहुन्छ? FIDULINK लाई अनुरोध पठाउनुहोस् यस क्षेत्रको घर जग्गामा विशेषज्ञता दिने सल्लाहकारले तपाईंको अनुरोधलाई ध्यान दिनेछ।
FIDULINK तपाईंलाई अनुसन्धान, भाँडा, खरीद, घर जग्गाको बिक्रीको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रस्ताव गर्दछ। तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय घर जग्गा खोज एजेन्सी 100% अनलाइन। परामर्शदाता संग एक निःशुल्क भेटघाट गर्नुहोस् FIDULINK तपाइँको घर जग्गा खोजको स्टक लिन।
के तपाईं भाँडा उद्देश्यका लागि घर जग्गा वा व्यवसायिक परिसर खोज्दै हुनुहुन्छ? FIDULINK लाई अनुरोध पठाउनुहोस् यस क्षेत्रको घर जग्गामा विशेषज्ञता दिने सल्लाहकारले तपाईंको अनुरोधलाई ध्यान दिनेछ।
FIDULINK एक समर्पित सल्लाहकार संग यसको ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। हाम्रा सल्लाहकारहरू फ्रान्सेली भाषा बोल्ने हो त्यसैले दुबईमा लगानी गर्न अरबी बोल्ने वा लन्डनमा लगानी गर्न अ English्ग्रेजी बोल्ने आवश्यकता पर्दैन। हामी तपाईंका लागि सबै चरणहरू स्थापना गर्दछौं अन्तिममा सम्बन्धी सम्भावना र कार्यहरूमा हस्ताक्षरको लागि। हाम्रो ग्राहकहरु समय को 99 XNUMX% यात्रा को आवश्यकता छैन।
किनकि हामी राम्रोसँग जान्दछौं कि स्थान परिवर्तनको समयमा वा स्थानान्तरण वा अन्य प्रवासीको समयमा मुख्य निवासको खोजी। हामी तपाईंको सपनाहरूको सम्पत्तीको लागि लक्षित खोजी कार्य गर्नको लागि तपाईंको सेवामा हाम्रो सबै नेटवर्कहरू राख्छौं।
हाम्रो ग्राहक सेवामा सन्देश पठाउने हो?
24 अन्तर्गत 48 H लाई प्रतिक्रिया